တချို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအထင်ကြီးမှုနဲ့ ပြောတက်အောင် လေ့လာကျတာမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ အထင်ကြီးမှုထက် စာရင် နိုင်ငံတကာနဲ့ အလုပ်လုပ်လာရင် လိုအပ်လို့မဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်ပြောချင်တာကိုပြောတက်အောင်ရယ်၊ သူပြောနေတာကိုနားလည်တက်အောင်ရယ် ဒီအချက် (၂-ခု) ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ စာတက်ရင် အများရဲ့လှည့်ဖျားမှုကိုမခံရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့။ ဘ၀အတွက် တခုခုကိုရွေးချယ်ကြတဲ့အခါမှာ (want - လိုချင်တာရယ်) (need - လိုအပ်တာရယ်) ၂-မျိုးထဲက တခုခုကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်လို့။ ယခုအင်္ဂလိပ်စာပြောတက်၊ ရေးတက်၊ နားလည်တက်ဖို့ဟာခေတ်တခုရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတာမို့ လူတိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်ရမဲ့ အချက်ဆိုရင်မှားမှာမဟုတ်ချေ။ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကဒွန်တွဲပါလာမှာအသေအချာဖြစ်လို့ ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာဟာလည်းလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးတွေ၊ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ကုန်သွယ်မှုတွေ၊ ပြောဆိုမှုတွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ မဖြစ်မနေတွေ့ လာတဲ့အခါ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတချို့က မိတ်ဆွေအားများစွာအထောက်အကူပြုစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင် ဖို့ကသင်တန်းတွေထက် ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်မှု၊ ဖြစ်ချင်မှုကလည်းအရေးပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုများများလေ့လာနိုင်ဖို့၊ စုစည်းတက်ဖို့၊ လေ့ကျင့်နေဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ စာစုတွေကအသုံးများသောအကြောင်းအရာတွေကိုပြောနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ဖို့မှာအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းက (V) တွေကိုများများလေ့လာနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် မိမိပြောချင်တဲ့အရာကို Grammar တချို့နဲ့ ဒွန်တွဲပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာပြောဆိုနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ Grammarအထားအသိုမှားခြင်းဖြင့်လည်းမိမိပြောလိုသည်ကိုမရောက်ပဲပုံစံတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လို့ အထူးပင်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် English for Everyone ဆိုတဲ့ လူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်…
May I + V1 ပါရစေ။ 2. S + Can, Could + V1 နိုင်သည်၊ တက်သည်။ 3. S + want to, would like to, wish to + V1 ချင်သည်၊ ဆန္ဒရှိသည်။ 4. S + want (O) to, would like (O) to + V1 စေချင်တယ်။ 5. S + should, ought to, had better + V1 သင့်သည်၊ လုပ်ရင်ပိုကောင်းသည်။ 6. S + make (O) + Adjအောင်လုပ်သည်။ 7.S + make (O) + V1 စေသည်၊ ခိုင်းသည်၊ စေခိုင်းသည်၊ အောင်လုပ်သည်။ 8. Let (O) + V1 စေ၊ စို့။ (ဆန္ဒပြုတဲ့အခါမျိုးသုံးသည်) 9. S + dare to + V1 ရဲသည်၊ ၀ံ့သည်၊ (ပြော၊ လုပ်) ရက်တယ်။ 10. S + need to + V1 လိုအပ်သည်။ 11. S + can't help, stand, Vingမလုပ်ပဲမနေနိုင်။ 12. S + be going to + V1 လိမ့်မည်၊ တော့မယ်။ 13. S + be able to + V1 နိုင်၊ တက်နိုင်၊ နိုင်စွမ်းရှိသည်။ 14. S + used to + V1 လေ့ရှိခဲ့သည်။ 15. S + be used to + Ving/N ကျင့်သားရ၊ အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ 16. S + must + V1 ရမည်။ (သံဓိဌါန်ချ) 17. S + has, have, had to + V1 ရသည်။ 18. S + look, sound, get, seem to + V1 ပုံရသည်၊ ဟန်ရှိသည်၊ ထင်ရသည်။ 19. Go, Come + V1 (လာပါ၊ သွားပါ) 20. It is time to + V1 (အချိန်ကျပြီ)
ဦးအဂ္ဂ (တောင်ငူ) English Speaking for Everyone စာအုပ်မှ ကိုးကားစုစည်းသည်။ ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားမှာကျေင်းမတက်ခင်က ဒီစာအုပ်နဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ငန်းသုံးစာတွေကိုလေ့လာတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လေ့လာလိုက်လျှင် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ကပိုတော်မှာပါ - အားပေးရေးသားလျှက်ပါပဲ။